हनुमान सेन्ट्रलमा आज साँझ ७ बजे आगलागी , दुई करोडको क्षति - PUBLICAAWAJ
हनुमान सेन्ट्रलमा आज साँझ ७ बजे आगलागी , दुई करोडको क्षति
प्रकाशित : शनिबार, साउन ११, २०७६२२:०९ पब्लिक आवाज /संवाददाता
भद्रपुर, ११ साउन/विर्तामोडको व्यापारिक भवन हनुमान सेन्ट्रलमा आज साँझ ७ बजे भएको आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले छ तलाको उक्त व्यापारिक भवनमा भएको आगलागी राति ८ः३० बजेतिर नियन्त्रणमा लिइएको बताउनुभयो । विर्तामोड, भद्रपुर र मेचीनगर नगरपालिकाबाट आएको दमकलको सहायताले आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको प्रजिअ दाहालले बताउनुभयो ।
आगो निभाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली संयुक्तरुपमा परिचालित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता एवं नायब प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आगलागीमा कुनै मानवीय क्षति नभएको र पहिलो तलामा रहेको एरिक जुत्ता पसलको एसी मेसिनमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको जानकारी दिनुभयो । विर्तामोडको मुक्तिचोकमा रहेको छ तले उक्त व्यापारिक भवनमा विराट एफएमको स्टेसन, लक्ष्मी र इन्भेस्टमेन्ट गरी दुई वटा बैंक, दुई वटा डिपार्टमेन्टल स्टोरसहित व्यापारिक पसल र होटल रहेका छन् ।
आगलागीबाट एरिक जुत्ता पसलमा मात्र क्षति पुगेको र अरु सबै पसल सुरक्षित रहेको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीमा पसलको करीब रु दुई करोडको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले पसल धनीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै बताउनुभयो ।
पाँचथर फिदिम बजारमा भीषण आगलागी !
इञ्जिनीयर श्रेष्ठ १ लाख घुससहित आज रङ्गेहात पक्राउ !
पहिराले नाजिङमा एक घर बगायो, चार जोखिममा
पर्यटकीयस्थल मैयुङ्गमा डाँडामा रहेको हाँस पोखरी (हेर्नुहोस् तीन फोटोमा)